Ejipta: Hosakanana ve ny Skype!? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2010 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, polski, عربي, русский, 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, македонски, English
Israa El Sakka dia nanoratra eto manodidina ilay resaka mandeha.
Andro vitsy lasa izao dia maro ny mpampiasa nitatitra ny olan'izy ireo amin'ny fidirana amin'ny Skype amin'ny alalan'ny modems Vodafone 3G an-dry zareo.
Ny sampana mpikarakara ny mpanjifa ao amin'ny Vodafone dia nilaza fa hosakanan'ny Telecom Egypt ny Skype ao Ejipta, ary tsy misy azon'izy ireo atao. Taorian'ireo antso avy amin'ny olona samihafa ho an'ny sampana mpikarakara ny mpanjifa ao amin'ny Vodafone, nilazana ry zareo fa “voasakana ny Skype hatramin'ny 13 Martsa araka ny baiko avy amin'ny Telecom Egypt ”
Tsy dia manaitra loatra ny mahita an'i Ejipta hanakana ny Skype, satria tsy afaka ny hanantena zavatra betsaka ankoatra izany avy amina fanjakana hita mibaribary fa mankahala ny aterineto ianao.
Zeinobia etsy andaniny dia tsy mahazo antoka loatra na marina na tsia ireo resaka mandeha.
Hoy izy manamarika:
Tsy haiko na marina na tsia ity vaovao ity, io maraina io aho no nandre ary tsy afaka manamarina ny fahamarinany na tsia. Indrindra fa Skype dia niasa tsara niaraka tamin'ny TE Data izay tsy hafa fa zana-tsampan'ny Telecom Egypt. Hatreo dia tsy nahagaga ahy ny mahita fa hosakanan'i Ejipta ny Skype satria Telecom Egypt sy ireo mpandraharaha amin'ny tolotra Finday [Mobile phone operators] dia tsy faly fa mampiasa ny Skype ny olona mba hanaovana antso iraisam-pirenena maimaim-poana!! Antony ara-toekarena no ilazako azy ity ankoatry ny maha antony ara-politika azy ankehitriny.
Ary farany, Gr33n Data dia mihevitra fa tsy misy idiran'ny governemanta mihitsy ity resaka ity, fa politikan'ny Vodafone manokana.
Araka ny efa ahitanareo azy, ny loharanom-baovao dia ireo mpampiasa ny Vodafone tsy afaka mampiasa ny Skype rehefa mba miditra aterineto amin'ny alalan'ny Modems USB 3G-ndry zareo. Ary hatramin'ny nilazan'ireo maro mampiasa ny tolotra ADSL any an-tokantrano fa hoe mandeha tsara mihitsy ny Skype any amin'ny toerana misy azy ireo. Tena mahatsapa aho avy eo fa tsy misy idiran'ny governemanta Ejiptiana ity resaka ity. Inoako fa Vodafone's DPI fotsiny io mba ho fanakanana ny Skype tsy hahavoa mafy ny fidiram-bolan-dry zareo.